के खुसी सबै मानिसहरू एकजुट साधारण सुविधाहरू छन्?
सबैलाई खुसी हुन चाहन्छ।
त्यो आनन्द को विज्ञान पछिल्लो केही वर्ष थप ध्यान आकर्षित गरेको छ किन, अनुसन्धानकर्ताहरूले क्षेत्रमा आफ्नो पर्यवेक्षणका मा रिपोर्ट प्रकाशित गर्न थालेका छन्, र सकारात्मक मनोविज्ञान जसको उद्देश्य सधैं मानिसहरूको जीवनलाई थप रंग ल्याउन गरिएको छ, झन् लोकप्रिय बन्ने छ।
क्षणमा हामी वास्तवमा के व्यवहार निहित खुसी मान्छे हो थाहा छ। तर अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि गर्दा बाँकी 60% जेनेटिक्स र बाह्य कारक निर्भर यो आनन्द मात्र 40% परिभाषित भन्छन्। तैपनि, हामी हाम्रो आनन्द को 40% नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ! का कसरी पत्ता गरौं।
1 सम्बन्ध आवश्यक छन् भनेर सम्झना
70 वर्ष भन्दा बढी मान्छे सयौं भन्दा बढी को अवलोकन मुछिएको एक ठूलो अध्ययन, कि happiest (र स्वस्थ) तिनीहरूलाई बीच तिनीहरूले विश्वास मान्छे संग बलियो सम्बन्ध कायम गर्ने ती थिए देखाए। हाम्रो नयाँ नायक - यो महत्त्वपूर्ण छैन र चलचित्र sociopaths र misanthropes बहाना सुशील छ। तर तिनीहरूले पनि चलचित्र अन्त्यमा एक्लै बाँकी छन्। र हामी यो जीवन हो, चलचित्र छैनन्, र यो खुसी हुनुको, बाँच्न धेरै राम्रो छ।
2. पद समय लडाई ठेगाना पैसा समय जीत
साथै, अवलोकन सुखी मान्छे बढी समय, थप पैसा रुचि कि देखाएका छन्। यो एक जीवनशैली लागि प्रयास गर्न पनि प्रयास मान्छे खुसी भनेर बाहिर गरियो। तपाईं अझै पनि कमाउन छैन सबै पैसा, र तपाईं एउटा छ जीवन।
3. आफ्नो बिल भुक्तानी गर्न पर्याप्त तैपनि कमाउन
मान्छे को कल्याण को स्तर आफ्नो आय संग, बढ्दै छ। तर यो संख्या सबैका लागि फरक छ र तपाईं खर्च कति निर्भर गर्दछ। स्वर्ग र पाल मा कसैले लागि वास्तवमा छन्। तर, पैसा आनन्द संग, पनि न्यूनतम लागत लागि पर्याप्त छैन जब, पनि, त्यहाँ समस्या हुनेछ।
4 को गुलाब गंध बस कहिलेकाहीं रहनुहोस्
आफ्नो जीवन संग थप सन्तुष्ट यसको क्षणमा स्वाद गर्न समय लाग्न गर्ने मानिसहरू हुन्। छैन कहिलेकाहीं, बस फूल गंध रोक्न विशाल आकाश हेर्न, तपाईँले बाँचिरहेका छौं भनेर आनन्दित भूल गर्छन्।
5 दया र selflessness प्रदर्शन देखाउनुहोस्, यो मूड सुधार
, स्वयंसेवक काममा संलग्न एक शनिबार जाने वा कठिन कार्य पूरा गर्न सहयोगी मदत। यो केवल मदत भएकाहरूलाई भन्दा सुखी गर्छ कि साबित भएको छ, तर पनि ती जो मदत गरे। लाभ सोच्न सबै समय - यो त लत्तो छ।
वृद्धि शारीरिक गतिविधि आनन्द को स्तर बढ्छ। यो पनि व्यायाम मानसिक रोग को लक्षण कम गर्न मद्दत गर्छ कि निराशा र neurosis लड्न सिफारिश चिनिन्छ। बस आफ्नो शरीर महसुस र यो अझ राम्रो बनाउन र समय रमाइलो तपाईं केहि सोच्न सक्छ जब, - चुन्नुहोस आफ्नो "मेरो" खेल - नृत्य, चलिरहेको, जिम वा steyching।
7 कुरा भन्दा मनोरञ्जन पैसा खर्च
त्यहाँ अनावश्यक trinkets वा आनन्द अनुभव बीच एक विकल्प छ भने, उत्तरार्द्ध चयन गर्नुहोस्। पूर्व सुशील लुगा तथा ग्याजेटहरू एक पटक भावना, छैन पुराना सामान जम्मा। पनि त्यस्ता पुस्तकहरू रूपमा, तपाईंले अनुभव दिन सक्छ भन्ने कुरा किन्न। यो पनि आनन्द बढ्छ।
8 वर्तमान मा प्रत्यक्ष
कुनै पनि मामला छैन विगतमा, र कुनै भविष्यमा। क्षण महसुस गर्न सिक्न मनन। वैज्ञानिकहरूले यसलाई साँच्चै मदत गर्छ भनेर पाएका छन्।
9 आफ्नो साथीहरूसँग समय खर्च
आकस्मिक परिचितहरू संग अन्तरक्रिया प्रसन्न तुल्याउन सक्छौं र जीवन केही नयाँ गर्न ल्याउन, तर पुरानो मित्र संग बैठक तपाईं र तिनीहरूलाई वास्तविक साँचो आनन्द हुनेछ। र तपाईंको साथी पनि आफूलाई धेरै आशावादी मान्छे छन् भने - यो पुरा दिन को लागि एक सकारात्मक चार्ज गर्छ!
हामी देख्न सक्छौं रूपमा यी छैन आफूलाई मा खेती गर्न गाह्रो हो कि गुण छन् हामीलाई राम्रो महसुस बनाउन सरल कदमहरू छन्। कि लागत तपाईं प्रयास? यो प्रयास गर्नुहोस्, र खुसी हुन!
व्यक्तित्व समाजलाई उपयोगी हुन एक व्यक्तिको क्षमता समावेश
कसरी मान्छे संग प्रेम पर्नु र मानिसहरूको हृदय कसरी जीत सिक्न?
यो कस्तो देखिन्छ जो छ, - Degenerate?
मनोविज्ञान मा रंग को मूल्य: तपाईंलाई लाग्छ सक्छ भन्दा बढी रोचक!
रेभ - यो तपाईं जीवनको लागि सम्झना गर्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो छ!
डिब्बाबंद खाना को एक जार कसरी खोल्न?
"डार्क एलीज": इवान बिनको कथाको विश्लेषण
न्यूनतम पुरानो उमेर पेन्सन, अवधारणा भाग र आफ्नो उद्देश्य सम्बन्धित मुद्दाहरू केही छ?
केराटाइटिस: ओप्थाल्मिक कोर्नियल को उपचार
थाहा छैन कसरी सिमीना पकाउने पकाउने? यो धेरै सरल छ!
मिन्स्क मा पार्क Loshitsa। मिन्स्क मा Chelyuskinites पार्क। मिन्स्क पार्क
Tsvetotip निर्धारण: जैतून अनुहारको रुप रंग